“Shaqsiyaad qaar ee kooxda Barcelona ah ma aysan dooneynin in Neymar uu soo laabto” – Messi – Gool FM
(Barcelona) 18 Okt 2019. Kabtanka Barcelona ee Lionel Messi ayaa rumeysan inay jiraan shaqsiyaad ka tirsan kooxda Blaugrana oo aan dooneynin in Neymar Jr uu ku laabto garoonka Camp Nou xagaagii hore.
Barcelona ayaa lala xiriirinayay inay dib ula soo saxiixaneyso ciyaaryahanka reer Brazil inta lagu guda jiray suuqa kala iibsiga xagaaga ee la soo dhaafay, iyadoo 27 jirkan uu doonayay inuu ka tago naadiga PSG maadaama uu dareensan yahay uusanan wax raaxo ah ku heysanin.
Haddaba Lionel Messi ayaa wareysi uu bixiyay Metro radio ee dalka Argantina wuxuu shaaca kaga qaaday inay jiraan shaqsiyaad aan dooneynin in Neymar Jr uu ku laabto garoonka Camp Nou xagaagii hore.
“Marka hore inuu soo laabto aad ayeey u adkeyd , maxaa yeelay way adkeyd in la arko isaga oo baxaya, marka labaad sababa laa xiriira qaabka uu kooxda kaga dhaqaaqay”.
“Waxaa jira shaqsiyaad ka tirsan kooxda iyo xubno aan dooneynin inuu dib u soo laabto, haddii ay arrinta ku xiran tahay isboortiga, Neymar waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican adduunka, laakiin waxaan fahmay dhammaan qodobbada kale”.
Horudhac: Eibar vs Barcelona... (Kooxda Barca oo hoggaanka horyaalka La Liga kala wareegi karta Real Madrid)